Kenya oo qirtay in saraakiil looga dilay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaden Baska – Hornafrik Media Network
Kenya oo qirtay in saraakiil looga dilay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaden Baska
By Liibaan Nuur	 On Dec 7, 2019
Dowladda Kenya ayaa faah faahin rasmi ah ka bixisay weerar dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen gaari Bus ah oo ku socdaalayey nawaaxiga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.
Guddoomiyaha gobolka Wajeer Loyford Kibaara oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in todobo ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen saraakiil Boolis ah, kuwaas oo uu sheegay inay ku sii jeedeen shaqadooda.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in kuwa kale oo saarnaa gaariga ay ka badbaadeen weerarkaasi, kadibmarkii ay ka boodeen daaqadaha, sida uu hadalka u dhigay.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas, waxaana lagu sheegay war lagu baahiyey warbaahintooda in dadka ay ku dileen weerarkaas ay qaarkood ka tirsanaayeen sirdoonka Kenya, halka kuwa kalena ay ka tirsanaayeen shaqaalaha dowladda.
Koox hubeysan oo dil ka geysatay suuqa Bakaaraha
Dowladda oo ka hadashay roobab dabeylo wata oo ka da’aya gobolada Puntland